I-GRAPHISOFT inyula uHuw Roberts njengoMlawuli oLawulayo-iGeofumadas
Epreli, 2019 ArchiCAD
Ulawulo lwaseBentley lwangaphambili luza kuqhuba isigaba esilandelayo sokwanda kweqhinga lomsebenzi; UViktor Várkonyi, i-CEO ephumayo ye-GRAPHISOFT ukukhokela uCwangciso loCwangciso kunye neCandelo loMbutho we-Nemetschek.
IBUDAPEST, nge-29 ka-Matshi 2019-GRAPHISOFT ®, umboneleli ophambili wezisombululo zesoftware yoYilo loLwazi lweeModeli kunye nabayili, namhlanje ubhengeze ukuqeshwa kuka-Huw Roberts njenge-CEO entsha. Utshintsho kubunkokheli kwiGRAPHISOFT yinxalenye yesicwangciso esomeleleyo sokugxila kubathengi nakwiimarike yinkampani yabazali, iQela laseNemetschek. Icandelo elitsha loCwangciso kunye noYilo, elikuyo i-GRAPHISOFT, likhokelwa nguViktor Várkonyi, owayesakuba yi-CEO yeGRAPHISOFT. IVárkonyi ikwasebenza njengelungu leBhodi eLawulayo kwiqela laseNemetschek.
UMnu Várkonyi, ngexesha lakhe le-27 iminyaka enkampanini, uye waba negalelo kwizinto ezininzi zobuchwepheshe obomeleza ukukhula ngokubanzi kwe-BIM kwishishini. Ngexesha lakhe le-10 iminyaka njengoMlawuli oyiNtloko, waphindwa kabini kwimali yenkampani kwaye wancedisa ukuhlanganisa indawo ye-GRAPHISOFT njengenkokeli yehlabathi kwi-BIM kubacwangcisi kunye nabaqulunqi.
UMnu Várkonyi uthi: "IGrafikhi ibiyinxalenye ebalulekileyo yomsebenzi wam." “Ndibe nethamsanqa lokuba ndibe yinxalenye yokukhula okungaqhelekanga kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo. Ukujonga phambili, ndiyakholelwa ukuba i-2019 iya kuba ngunyaka wotshintsho kuzo zombini i-GRAPHISOFT kunye neQela laseNemetschek, evumela ukuhlangana okukhulu phakathi kweempawu zethu zoodade. U-Huw Roberts uzisa i-GRAPHISOFT “Izakhono ezikhethekileyo zeshishini nezobunkokeli, amava omzi mveliso abanzi, kunye nothando lokwenene lokunceda iingcali ze-AEC zixhamle kutshintsho oluqhutywa yitekhnoloji. Ndiqinisekile ukuba inkampani ngoku isezandleni ezilungileyo zokufezekisa iinjongo zayo ezinamabhongo! "
Sesimeni irekhodi track esiluqilima lokukhula kule minyaka ilishumi idlulileyo, GRAPHISOFT wafuna ukuba ukumisela ingcali inkokheli kushishino odlamkileyo ogama izakhono kunye namava ngokukhawuleza ihlanganiswe amathuba afumanekayo kuncede isilinge inkampani. Ukukhethwa kaMnu Roberts, kuba lishishini ngempumelelo kunye iminyaka yamava ubunkokheli kwishishini kunye uvumo zokwakha, ibonisa ukumiselwa GRAPHISOFT kwenza negalelo elibonakalayo sobuchule zaguquka elilandelayo lweenkokheli zalo emarikeni.
UMnu Roberts, wezakhiwo ngu wobugcisa, iye yabamba iindima isigqeba kulawulo kwimveliso, ukuthengiswa kunye nophuhliso loshishino ngexesha umsebenzi wakhe abalaseleyo, eqondisa ekwandisa isicwangciso ifuthe emarikeni kunye ixabiso lemarike ukuba iinkampani zobugcisa ezinkulu. Avelele umsebenzi wakhe ziquka 17 iminyaka iindima yobunkokeli Bentley Systems, umakhi kwihlabathi izisombululo software yokulawula impahla izibonelelo kunye nendima uMlawuli neNtengiso BlueCielo, inkampani esekelwe kwi-Netherlands ENetherlands kutshanje ifunyenwe yi-Accruent. Xa ethatha inxaxheba ephambili kwi-GRAPHISOFT, uMnu Roberts, ovela ePhiladelphia, eU.SA. UU., Uya ku-Budapest, eHungary, apho ikomkhulu le nkampani ikhona khona.
"Kuyo yonke iminyaka yam kolu shishino, bendichukunyiswa kukunyaniseka ngokuzithemba kwabathengi beGRAPHISOFT kunye noyilo olukhuthazayo abalwenzayo kwihlabathi liphela," utshilo uMnu. Roberts. "Ndichukumisekile kukuzibophelela okunzulu okwenziwa liqela kubathengi bethu kunye namaqabane ngokwenza imveliso, ulwazi ngeshishini kunye nokuzinikezela." Ukuphawula ukuba kutheni ndicinga ukuba inkampani ilungiselelwe ukuphumelela, uMnu Roberts uqaphele:
"Umdibaniso wokwenza umsebenzi wobugcisa kunye nokuyila, inkcubeko yomanyano olomeleleyo kunye nempumelelo yeshishini engapheliyo ibonelela ngeqonga elomeleleyo kwisahluko esilandelayo sokukhula kweGRAPHISOFT. Ndiyazingca ngokujoyina iqela njengoko sisandisa amandla ethu okubonelela ngezisombululo kunye nezibonelelo kubasebenzisi bethu kwihlabathi liphela. Ndingathanda ukubulela uMnu Várkonyi ngomsebenzi wakhe obalaseleyo ekwalathiseni ukukhula kwenkampani kuqoqosho lwangoku nolomeleleyo kwezemali. Isizwe, nto leyo iyimfuneko yokufezekisa izicwangciso zethu zokukhula kwiminyaka ezayo. "
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga noMnu Roberts, tyelela iphepha Ukhokelo lwe-GRAPHISOFT. Ngolwazi malunga nohlengahlengiso lweqela laseNemetschek, ndwendwela iphephandaba. I-press ye-Nemetschek. Ngolwazi olongezelelekileyo, okanye ukucwangcisa udliwanondlebe noMnu. Roberts, nceda unxibelelane nonxibelelwano lwethu noonondaba ku cofa@graphisoft.com.
I-GRAPHISOFT® iqalile ukuhlaziywa BIM kwi1984 kunye I-ARCHICAD®, isofthiwe yokuqala ye-BIM yabakhi bezoshishino. I-GRAPHISOFT iyaqhubeka nokukhokelela kwishishini ngezisombululo ezintsha ezifana nokuguqulwa kwayo I-BIMcloud®, indawo yokuqala yokubambisana kwe-BIM kwixesha langempela; kwaye I-BIMx®, usetyenziso olukhokelayo lwehlabathi lokufikelela ngokulula kwi-BIM. IGrafikhi yinxalenye yefayile ye- Iqela leMetetschek.
Ukufumana olunye ulwazi, tyelela www.GRAPHISOFT.com okanye silandele kwi-Twitter @GRAPHISOFT.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iimagazini zeGeomatics - Phezulu kwe-40 ukuya kwiminyaka emi-5 kamva
Post Next Uqala ngesinyathelo esiqinileyo kwiForam ye-2019 Yehlabathi yeGeospatial e-AmsterdamOkulandelayo »